Genstake စျေး - အွန်လိုင်း GEN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Genstake (GEN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Genstake (GEN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Genstake ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 970 082.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Genstake တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Genstake များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GenstakeGEN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0067GenstakeGEN သို့ ယူရိုEUR€0.0057GenstakeGEN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00512GenstakeGEN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00613GenstakeGEN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0603GenstakeGEN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0425GenstakeGEN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.149GenstakeGEN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0251GenstakeGEN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00893GenstakeGEN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00933GenstakeGEN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.15GenstakeGEN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0519GenstakeGEN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0367GenstakeGEN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.501GenstakeGEN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.13GenstakeGEN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0092GenstakeGEN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0101GenstakeGEN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.208GenstakeGEN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0466GenstakeGEN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.71GenstakeGEN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.93GenstakeGEN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.59GenstakeGEN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.491GenstakeGEN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.185
GenstakeGEN သို့ BitcoinBTC0.0000006 GenstakeGEN သို့ EthereumETH0.00002 GenstakeGEN သို့ LitecoinLTC0.000115 GenstakeGEN သို့ DigitalCashDASH0.00007 GenstakeGEN သို့ MoneroXMR0.00007 GenstakeGEN သို့ NxtNXT0.505 GenstakeGEN သို့ Ethereum ClassicETC0.000953 GenstakeGEN သို့ DogecoinDOGE1.88 GenstakeGEN သို့ ZCashZEC0.00008 GenstakeGEN သို့ BitsharesBTS0.246 GenstakeGEN သို့ DigiByteDGB0.216 GenstakeGEN သို့ RippleXRP0.0223 GenstakeGEN သို့ BitcoinDarkBTCD0.000225 GenstakeGEN သို့ PeerCoinPPC0.0216 GenstakeGEN သို့ CraigsCoinCRAIG2.98 GenstakeGEN သို့ BitstakeXBS0.279 GenstakeGEN သို့ PayCoinXPY0.114 GenstakeGEN သို့ ProsperCoinPRC0.82 GenstakeGEN သို့ YbCoinYBC0.000004 GenstakeGEN သို့ DarkKushDANK2.1 GenstakeGEN သို့ GiveCoinGIVE14.15 GenstakeGEN သို့ KoboCoinKOBO1.49 GenstakeGEN သို့ DarkTokenDT0.00617 GenstakeGEN သို့ CETUS CoinCETI18.87